Sorenson Media piakota 9 bụ ọhụrụ version nke Sorenson si elu-kwadoro omume na-ahapụ gị mpikota onu ọ bụla video, na-eme na video mma maka ebugote na òkè. Ọ bụ a ngwa ngwa usoro ihe omume, na nnọọ customizatable, otú ọ bụla onye ọrụ, ọhụrụ ma ọ bụ ahụmahụ, nwere ike iji ya, ma ị na-eji preset nhọrọ ma ọ bụ ike gị mkpirisi ụzọ. Sorenson-enye ihe na-omimi, kenkwukorita nkuzi na software na ha website, ma isiokwu a ga-enye gị otu nnyocha nke otú ka malitere nnọọ ole na ole nzọụkwụ.
Na Sorenson Media piakota, na ị na-enwe ike mbupụ gị video na a dịgasị iche iche nke formats, otu n'ime ndị kasị ọba akwụkwọ nke formats na ọ bụla omume ị ga-ahụ. Piakota ahapụ gị ike videos na ike na na na ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke weebụsaịtị na ezi video mma. Ị na-zere ihe ọ bụla esemokwu na pụrụ ime mgbe gị ahịa switches nchọgharị ma ọ bụ na ndekọ na iji a mobile na ngwaọrụ dị a smartphone ọ bụ mbadamba. Gị website ọbịa gaghị ahapụ si n'ihi na ha na-eji ihe Android ekwentị ma ọ bụ ihe iPhone, ngwaọrụ nwere ike ma ọ na-akwado ụfọdụ formats nke video. Piakota na-akwado nke ugbu a sistem, gụnyere Windows 8 na Mountain odum.
Ka na-ekwu ihe atụ na ị chọrọ mpikota onu a raw video n'ime QuickTime.
Nzọụkwụ 1. Bilie gị video njikere
Ọ bụ kacha iji nweta aga site na-enwe a video njikere mbubata. Malite site mwube gị audio na 48kHz, na eme ka n'aka gị video zuru ezu na okwu nke ọdịnaya tupu mmeghe Sorenson. Ị ga-enwe ike ime mgbanwe ụfọdụ na piakota, dị ka anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị.
Nzọụkwụ 2. Launch Media piakota
Mgbe ị dị njikere, malite Media piakota. A na-esote image bụ ihe peeji anya dị ka mgbe mbụ ị imeghe ya. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji Nkuzi, i nwere ike ikwu na peeji a site na ịpị Nso Tutorial. I nwekwara ike uncheck 'Gosi a window mgbe piakota emepe' nhọrọ na ozugbo ẹkedori software oge ọzọ.
Ozugbo software emepe, na-emeghe gị faịlụ site na-ahọpụta Import File, ma ọ bụ ị nwere ike ịdọrọ faịlụ site ya nchekwa n'ime ọrụ ohere.
Ọ bụrụ na ị nwere otutu videos mpikota onu, i nwere ike imeghe ha niile na otu oge na mpikota onu ha n'otu ọdụ, na ogologo oge dị ka mwube gị ịnọgide na otu ihe ahụ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nke faịlụ ị chọrọ ime na ị chọrọ ọrụ agbụ ha (mmepụta si video A na-eduga ná ọsọ ọsọ nke video B), ị nwere ike ime nke a na-eji Watch nchekwa. The isi iyi faịlụ abịakọrọ niile nke ndapụta na ị chọrọ iji usoro a, kama nke na-eji gbanwere mmepụta faịlụ, mere na ị na arụ ọrụ mgbe nile site na mbụ.
Nke a bụ isi na-arụ ọrụ na peeji nke maka piakota.
The interface-egosi na ị fọrọ nke nta niile nke gị buttons na na taabụ na n'aka-ekpe n'akụkụ. The nnukwu nwa ohere na nri bụ gị preview window. Gị ọrụ igbe bụ na ala. Na ala n'aka nri button, afanyekwa Ọ !, bụ isi button ị ga pịa mgbe ị na njikere mpikota onu. Anyị ga-amata ihe banyere ya mgbe e mesịrị.
Ozugbo ọ dị, ị ga-enwe ike dezie gị video na iji ngwá ọrụ na n'aka ekpe n'akụkụ, e gosiri n'elu, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ibubaa ma ọ bụ, ma ọ bụ ubi echiche gị, ị pụrụ ime na ebe a zuru okè na video tupu ị malite na ike nke usoro.
Nzọụkwụ 3. Họrọ mmepụta ọnọdụ
Ọzọ, ị ga-achọ họrọ gị mmepụta ọnọdụ, na nke a, QuickTime.
Iru a menu, họrọ Format na mkpakọ Ntọala window, wee pịa on QuickTime. Nke a ga-emeghe elu ọzọ window na n'ebe ị nwere ike họrọ ntọala na ị chọrọ gị QT video inwe. E nwere presets i nwere ike iji, ma ọ bụ i nwere ike pịa Advanced bọtịnụ na imere onwe gị ntọala n'ebe ahụ.
Nke a bụ ihe peeji anya dị ka ozugbo ị họrọ gị ọnọdụ. Ị ga-ahụ igbe a na ala nri akụkụ nke isi piakota page.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ihe ọmụma na onye ọ bụla nhọrọ Tupu ị họrọ ya, hover n'elu aha na obere igbe ga-gbapụta na-akọwa ihe na nhọrọ pụtara, dị ka ị na-ahụ na buff acha igbe na foto n'okpuru. Ị nwekwara ike ịga saịtị a maka nkọwa nke ihe ọ bụla nke ụdị nke mkpakọ nhọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi hazie gị ntọala, dị ka ị na-agbanwe ọ bụla nhọrọ, ijide n'aka na-pịa Ok button, otú ọ bụla ọnọdụ a na-echekwa tupu window closes.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nhọrọ na-abịa na piakota.
Ọ bụrụ na ị ka gị onwe gị na parameters, ị nwere ike zọpụta ha n'ihi eji oge ọzọ. Atọrọ atọ nwekwara ike gbanwere na mgbe ahụ resaved iji mgbe e mesịrị. Ọ bụrụ na ị chọọ, ị nwere ike ịmepụta gị ahaziri preset nhọrọ na niile nke gị onwe gị ntọala - audio mkpakọ, video mkpakọ, nzacha, na mmepụta. E nwekwara a preset collection online ị nwere ike ịnweta ibudata n'ime afanyekwa na ojiji, na saịtị a.
Ebe a bụ na ihuenyo nke ị nwere ike ime ka gị onwe nzacha. Na nke a atụ, Timecode a na-omenala setịpụrụ.
Ka ị pụrụ ịhụ, e nwere otutu nhọrọ ị pụrụ ịhọrọ site na. N'ime ọ bụla nke nhọrọ, ị nwere ike hazie mwube gị, dị ka opacity ma ọ bụ font size. Kwesịrị na ị chọrọ ịgbanwe nyo ntọala mgbe e mesịrị, mmadụ abụọ click on nyo site na listi. Ihuenyo ga-emeghe ma ị nwere ike ime ka gị na mgbanwe, wee pịa Ok ịzọpụta gị mgbanwe.
Nzọụkwụ 4. Mee audio ntọala
Ị nwere ike ịtọ audio ntọala iche site na video, agbanwe agbanwe na ntọala n'okpuru Nhọrọ taabụ. Nke a na-eme ka ọ bara uru n'ihi na compressing videos nke okwu dị iche iche ka ị ga-maka a music dabeere video. Ka na-ekwu na ị nwere video nke a ogbako keynote okwu. Nịm audio bit ọnụego ka 64kbps n'okpuru MPEG-4 (nke QuickTime) mkpakọ na ọwa na mono (ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na stereo). N'ihi na vidiyo na music, unu ga-esunye ọdịyo na 128kbps na họrọ stereo ọwa nhọrọ. Nịm gị Target mmeputa "kpọmkwem Bit Rate". Gị mmepụta sample ọnụego kwesịrị-ahụ ga-atọrọ na 44.10kHz.
Echegbula ọ bụrụ na ị gbanwee obi gị - Ị nwere ike ịgbanwe ntọala ọbụna mgbe ị na etinyere ha ka ha a video ma ọ bụ video nke, ma tupu ị mpikota onu video
Nzọụkwụ 5. Mee ntọala
Ka na-ekwu na i mewo ka gị onwe gị na preset QuickTime mkpakọ ọnọdụ. Pịa ya mgbe ị dị njikere itinye ndị ntọala gị video ma ọ bụ vidiyo, wee pịa Mee. Ma ọ bụ i nwere ike ime nke a na otu n'ime ndị preset nhọrọ. Alternatively, ị nwere ike ịdọrọ mwube ị họrọ n'elu clip na dobe ya n'ebe ahụ.
Ịnwere ike ihuchalu ọ bụla mmetụta na ị chọrọ itinye tupu compressing site na iji A / B mmịfe. Nhọrọ, ị nwere ike mpikota onu ise sekọnd nke video na-ahụ preview. Otú a ka ị pụrụ ịhụ ihe mkpakọ ga-ele anya dị ka tupu dum video abịakọrọ, ị pụrụ ime ka ọ bụla mgbanwe dị mkpa.
Nzọụkwụ 6. Tinye ndị ọzọ na atụmatụ ma ọ bụrụ na ị na-amasị
Piakota nwere ike na-akpaghị aka mepụta HTML mkpado n'ihi na ị na ga-hụ n'agbanyeghị ihe nchọgharị gị website esenowo na-eji, ị ga-nwere ikike video maka ha. E nwere ndị ọzọ atụmatụ ị nwere ike itinye, dị ka mechiri emechi captioning, ma ọ bụ tupu mpịakọta / post-mpịakọta nhọrọ (nke pụtara a ụzọ video ma ọ bụ na-edu si video).
Ọ bụ ugbu a oge mpikota onu. Pịa piakota Ọ! bọtịnụ na ala nke ihuenyo na-amalite mkpakọ. A ga-enwe a na-enwe ọganihu mmanya na-abịa ga-egosi na ị na ọnọdụ. Dabere na ogologo nke gị video, enye usoro ihe omume 5-10 nkeji ịrụcha. Nke a bụ ihe dị ka ugboro isii ngwa ngwa karịa ndị ọzọ mkpakọ omume. Usoro ihe omume ga na-akpaghị aka ịzọpụta na otu nchekwa dị ka ihe mbụ. I nwekwara ike họrọ akpaka bulite bụrụ na ị chọrọ otu n'ime ise ọnọdụ.
Nke a bụ igbe họrọ gị bulite ọnọdụ site na. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime a omenala bulite, ị pụrụ ime nke a kwa. Họrọ Publishing Nhọrọ na ala nke ekpe kọlụm, na-abanye na ọmụma na igbe. Ozugbo ị na-azọpụta ya dị ka OK, ọ ga-bulite gị video maka gị otú a. I nwekwara ike ime ndụ gụgharia site na iji Apple format akpọ HLS.
E nwere ya! A ọkachamara na-achọ video uploaded gị website, obi nkoropụ free, na-anapụghị a ton nke oge.
Gị piakota omume na-abịa na Sorenson 360 for free, nke na-enye gị a video ekwusara n'elu ikpo okwu na-arụ ọrụ seamlessly na ihe nile nke Sorenson mmemme. Ị nwere ike na-ebipụta ọ bụla website, n'ebe ọ bụla n'ụwa, na-adị mfe ahaziri video ọkpụkpọ. Nchekwa na-haziri mfe, na subaccounts nwere ike melite otú multiple itieutom nwere ike ịnweta faịlụ na iji ha. Ị nwekwara nhọrọ melite listi ọkpụkpọ na-enye Facebook Embedding.
Ka anyị na hụrụ, na dị nnọọ ole na ole nzọụkwụ na n'elu N'ezie nke a nkeji ole na ole, i nwere ike na-a raw video faịlụ na mpikota onu ya maka mfe ebugote ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke weebụsaịtị. Edezi n'oge usoro na-adị mfe rụzuru, kwa. Ihe ọ bụla ị chọrọ ka gị na video ikwu, sị, i mee ka ọ eme na Sorenson Media piakota 9.
Video Compressor: 5 Ụzọ mpikota onu a Video
Top 5 Free Online AVI ka MOV Ntụgharị
Na-atụ aro Video Formats N'ihi Nexus 7
Tọghata MOD ka MP4 ọsọ ọsọ na mfe
Olee otú Play BBC Radio na iTunes
> Resource> Video> Olee mpikota onu Videos na Sorenson Media piakota 9